ORANGE DIGITAL CENTER : Hahazo tombony ireo tsy an’asa sy tsy manana diplaoma · déliremadagascar
AMBATOVY: Azy irery ny iray ampahatelon’ny hetra miditra amin’ny fanjakana
CNAPS-CCIFM: Nitombo indray ireo mpikambana very asa nahavita fiofanana
LA GASTRONOMIE PIZZA : Nandalo sedra maro nandritra ny 20 taona nijoroany
STAGE PRO MIARAKA AMIN’I NICOLAS SANTUCCI: Misokatra ho an’ny mpilalao 10 ka hatramin’ny 25 taona
RAKOTOSON ALEXANDRE: Tsara ny toerany “styliste” Malagasy eo anivon’ny iraisampirenena
Socio-eco	 15 janvier 2021 R Nirina
Ho fampananan’asa ny tanora sy fampiroboroboana ny nomerika. Hotokanana tsy ho ela eto Madagasikara ny Orange Digital Center (ODC). Nisy ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ny Orange sy ny GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), eo ambany fiahian’ny Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) ny volana desambra 2019 momba famatsiambola 30 tapitrisa Euros ho fampiroboroboana ny fampanan’asa ho an’ny tanora, ny fandraharahana sy ny sehatry ny nomerika amin’ny firenena 14 eto amin’ny kontinanta afrikanina sy Moyen-Orient. Ho fampivoarana ny fifehezana ny nomerika ho an’ny tanora miisa 20.000 sy ho famoranan’asa maherin’ny 8000 ity fandaharan’asa “develoPPP.de” any BMZ. Ho fampiharana izany eto Madagasikara dia niroso tamin’ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa ny Orange Solidarité Madagascar sy ny GIZ Madagascar amin’ny fametrahana ny Orange Digital Center (ODC).
Ivon-toerana mampivondrona fandaharan’asa efatra manome fiofanana ho an’ny tanora momba ny nomerika, manohana ireo “start-up” ary manampy amin’ny fitadiavana famatsiambola ny ODC. Hita ao anatin’ny ODC ny sekoly nomerika na ivon-toerana momba ny teknolojia. Malalaka ny fidirana ao aminy ary maimam-poana, mikarakara fiofanana, hetsika sy fanohanana ho an’ireo “développeurs”, “geeks” ary tompona tetikasa. Eo ihany koa Fablab Solidaire, ivon-toerana ahafahana mamorona amin’ny sehatry ny nomerika amin’ny alalan’ny fitaovana nomerika, misokatra ho an’ny daholobe fa anisany natao ho an’ny tanora tsy manana diplaoma sy tsy an’asa ihany koa izy ity. Ankoatra izany dia hahazo tombontsoa amin’ny alalan’ny ODC ihany koa ireo mpandraharaha noho ny fisian’ny Orange Fab sy ny Orange Digital Ventures Africa satria hanampy azy ireo amin’ny fampiroboroana ny tetikasan’izy ireo sy fahazoana famatsiambola. Ho an’ny Orange Digital Ventures Africa manokana dia manana famatsiambola 50 tapitrisa Euros hamatsiana ireo start-ups amin’ny firenena afrikanina sy faritra Moyen-Orient ity rafitra ity.
FONDATION AXIAN : Mampiasa angovo avy am...
AMBATOVY: Azy irery ny iray ampahatelon�...
CNAPS-CCIFM: Nitombo indray ireo mpikam...
LA GASTRONOMIE PIZZA : Nandalo sedra mar...
STAGE PRO MIARAKA AMIN’I NICOLAS SANTU...
RAKOTOSON ALEXANDRE: Tsara ny toerany �...
MIHAMY MADA FASHION 2021: Styliste 23 no...
RANDRIANARISOA PENJY : Voafidy ho filoha...
FAMONJENA AINA: Nifanentana ireo olon-t...
SAINT VALENTIN: “ Nouvel arrivage” ...
FONDATION AXIAN : Mampiasa angovo avy amin’ny fako ny Lycée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana 25 février 2021
AMBATOVY: Azy irery ny iray ampahatelon’ny hetra miditra amin’ny fanjakana 25 février 2021
CNAPS-CCIFM: Nitombo indray ireo mpikambana very asa nahavita fiofanana 23 février 2021
LA GASTRONOMIE PIZZA : Nandalo sedra maro nandritra ny 20 taona nijoroany 23 février 2021
STAGE PRO MIARAKA AMIN’I NICOLAS SANTUCCI: Misokatra ho an’ny mpilalao 10 ka hatramin’ny 25 taona 17 février 2021
RAKOTOSON ALEXANDRE: Tsara ny toerany “styliste” Malagasy eo anivon’ny iraisampirenena 15 février 2021
MIHAMY MADA FASHION 2021: Styliste 23 notolorana mari-boninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolontsaina 15 février 2021